पुनः जीवित भए झलकमान गन्धर्व - Everest Dainik - News from Nepal
पुनः जीवित भए झलकमान गन्धर्व
साउन १४ । हुन त मरेर पनि दर्शक श्रोता माझ सधै बाँचेका झलकमान गन्धर्वलाई हिजोको एक कार्यक्रममा उनलाई पुनः जीवित बनाईएको छ । उनलाई जीवित बनाएको हुन् नेपाल आईडल एपिशोड २२, पार्ट ४ का प्रतियोगी सुरज थापाले ।
हिजो साँझ टेलिभिजनको पर्दामा रहने जो कोहीमात्र रोएनन् स्वयम सारङ्गी बजाउने र निर्णायक मण्डलका समेत आँखामा आँशु देख्न सकिन्थ्यो ।
झलकमान गन्धर्वको कालजयी आमाले सोध्लीन्नी खोई छोरा भन्लिन् बोलको गीत सुरुज थापा झलकमान गन्धर्वको दिवगंत आत्माबाटै गायका थिए । उनको गीत सकिए लगत्तै निर्णायक मण्डलको प्रत्येकले भने– ‘स्वर्गीय झलकमान गन्धर्व पुनः जीवित हुने भयो । उनको अवतार सुरज थापाका रुपमा भएको छ । त्यसै त झलकमानको आमाले सोध्लिन्नी खोई छोरा भन्लिन् बोलको गीतले नेपाली बोकेको थियो ।
यसले नेपालको ईतिहास र मौलिकता बोकेको थियो, जुन गीतलाई झलकमानको आत्मा बनेर सुरज थापाले गाएको थियो, यो लाखौं प्रतिष्पर्धीमध्ये अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट प्रस्तुती हो ।
याे पनि पढ्नुस पत्रकारिता र कलाकारिता एकैसाथ थेग्लान् कृष्णबाबु ?
निर्णायक मण्डल मध्येकी चर्चित र वरिष्ठ गायिका कोमल वलीले छातीमा हात राखेर भनिन् तपाईको गीतमात्रै होईन फिलिङ्ग पनि आत्मैबाहिरै सबैले देखिने थियो ।
युवापुस्तामा हराईसकेको र विभिन्न कारण देखाउँदै कतिपय सञ्चारमाध्यमले प्रशारण समेत गर्न छाडेको झलकमान गन्धर्वको गीत सुनेर अहिले पनि जो कोहीको आँखा रसाईरहने गरेको बेला हिजो साँझ सदरमुकाम तम्घासका होटल र पसलमा सुरज थापाको स्वरमा उक्त गीत सुन्नेहरु रोईरहेका थिए । गौरवको कुरा, सुरज थापाको स्वरमा सारङ्गी प्रस्तोता थिए उनै स्वर्गीय झलकमान गन्धर्वका नाति धर्म गन्धर्व ।
याे पनि पढ्नुस अहिले आएर–‘गाई र हेलो हाई’ ?
स्टेजमा निम्ताईपछि गन्धर्वले भने– ‘झलकमान गन्धर्व मेरा वुढामावली अर्थात मेरो आमाको मामा हुनुहुन्छ, म उनको नाति हुँ, आज सुरज भाईले उहाँलाई जीवित बनाउनुभएको छ म गर्वित र हर्षित छु ।
एकपटक यो लिङ्कमा क्लिक गरी झलकमान गन्धर्वको दिवगंत आत्मा उनै सुरज थापाको भिडियो हेरौँ-